TodoDLS - तपाईंको मनपर्ने ड्रीम लीग फुटबल समुदाय
।। DLS पीसी को लागी
✉️ सम्पर्क गर्नुहोस्
स्वागत छ TodoDLS! कुनै पनि खेलाडीको लागि आवश्यक पृष्ठ ड्रीम लिग फुटबल (DLS)। साथै, तपाईको संस्करण जे भए पनि DLS मनपर्ने: 2020, 2019... यहाँ तपाईंले निःशुल्क सिक्का प्राप्त गर्ने तरिकाहरू, आफ्नो खेल सुधार गर्न गाइडहरू, वर्दीहरू र... धेरै कुराहरू पाउनुहुनेछ! तल तपाईंसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ, तर पढिरहनुहोस्, किनकि त्यस पछि त्यहाँ धेरै रोचक गाइडहरू छन् यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने! तपाइँका सबै खेलहरू जित्नुहोस्!
PC मा ड्रीम लीग सकर कसरी खेल्ने
ड्रीम लिग सकरको लागि वर्दी (किटहरू)
ड्रीम लीग सकरमा नि: शुल्क सिक्का पाउनुहोस्
ड्रीम लीग सकरका लागि धोखाहरू: कसरी राम्रो खेलाडी बन्ने
ड्रीम लीग सकरमा ल्याग कसरी हटाउने
ड्रीम लीग फुटबल क्यारियर मोड गाइड
कसरी नि: शुल्क हीरा प्राप्त गर्ने DLS
हामीसँग धेरै छ पूर्ण वर्दी, तिनीहरूको घर र बाहिर किटहरू, साथै लोगो र ढालहरू। तपाइँ तल केहि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ हामीसँग भएका सबै वर्दीहरू हेर्न उपलब्ध.
वर्दी (किट्स) र आर्सेनल लोगो
एटलेटिको डे म्याड्रिडको वर्दी (किटहरू) र लोगो
वर्दी (किट्स) र लोगो Chelsea
लीसेस्टर सिटी वर्दी (किट) र लोगो
वर्दी (किट्स) र लिभरपूल लोगो
वर्दी (किटहरू) र म्यानचेस्टर सिटी लोगो
युनिफर्म (किट्स) र म्यानचेस्टर युनाइटेड को लोगो
युनिफर्म (किट्स) र रियल म्याड्रिड को लोगो
सबै युनिफर्महरू हेर्नुहोस्
ड्रीम लीग फुटबल के हो?
यदि कुनै साथीले तपाईंलाई यो पृष्ठमा आमन्त्रित गर्नुभएको छ र तपाईंलाई ड्रीम लीग सकरको बारेमा राम्ररी थाहा छैन भने, हामी तपाईंलाई चाँडै बुझाउने प्रयास गर्नेछौं।
ड्रीम लिग फुटबल अक्सफोर्ड (इंग्ल्याण्ड) मा आधारित एक अंग्रेजी स्टुडियो द्वारा विकसित मोबाइल फोनहरू (एन्ड्रोइड, आईफोन र विन्डोज फोन पनि) को लागि भिडियो गेमहरूको गाथा हो। पहिलो टच खेलहरू। गाथा को नवीनतम संस्करण हो DLS 2020, जुन खेलको शैली र यसमा प्रगति गर्ने तरिकामा धेरै परिवर्तनहरूसँग आउँछ।
DLS २०२० सागाको अन्तिम संस्करण हो
यो गेमले गेम स्टोरमा १० लाखभन्दा बढी डाउनलोडहरू प्राप्त गरेको छ। गुगल प्ले र प्रसिद्ध फुटबल खेलाडीहरू मनपर्छ Gareth गठरीस्पेनिस फुटबल टोली रियल मड्रिड र Luis Suarezएफसी बार्सिलोनाको।
संस्करण बाट DLS 2016, खेल को परिचय FIF प्रो लाइसेन्स वास्तविक फुटबल खेलाडीहरू र अन्य फुटबल प्रशंसकहरूको सामना गर्न मल्टिप्लेयर मोडसँग खेल्न सक्षम हुन।
यदि तपाईलाई यो पृष्ठ मनपर्छ र ताजा समाचारको साथमा रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईले हामीलाई फेसबुक वा ट्विटरमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाइँसँग शङ्का वा कुनै प्रश्नहरू छन् भने तपाइँ शीर्ष दायाँमा सम्पर्क फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो कुनै पनि लेखमा टिप्पणी सेक्सनमा जानुहोस्। भ्रमण गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद TodoDLS!
TodoDLS मोबाइल भिडियो गेम, ड्रीम लीग सकरसँग सम्बन्धित सबै कुराको लागि जानकारीको उत्तम स्रोत हो। नवीनतम गाइड, सुझाव र समाचार यहाँ!